Honor 6 Plus, nosedraina ilay phablet Honor vaovao | Androidsis
Honor dia mitantana hahazoana toerana eo amin'ny tsena amin'ny alàlan'ny fampisehoana ireo terminal miaraka amin'ny sandam-bola tena lafo. Ny telefaona rehetra ao amin'ny laharana Honor izay azonay nosedraina dia namela tsiro lehibe teo am-bavantsika. Ary tonga izao ny fotoana hanaovana zavatra feno Honor 6 Plus famerenana.
Fitaovana iray izay manana tanjona mazava be: ny ho lasa safidy hodinihina eny an-tsena ho an'ny phablets avo lenta, anjakan'ny totohondry vy an'ny Samsung sy ny faritra Note. Inona avy ireo marika mampiavaka anao? Kalitaon'ny famaranana, ny fahefana ary ny vidiny. Satria vitsy ny mpanamboatra manolotra finday manana ireo toetra ireo amin'ny vidiny mahaliana toy izany: 399 euro.
1 Honor 6 Plus, namboarina niaraka tamin'ny akora premium
2 Asehoy: iray amin'ireo tanjaky ny Honor 6 Plus
3 Phablet matanjaka be matoky ny vahaolany manokana
4 Android 4,4 KitKat, ny Achilles ombelahin-tongotry ny Honor 6 Plus
5 Fakan-tsary Honor 6 Plus, zavatra manintona hafa an'ity phablet mahaliana ity
6 Ohatra amin'ny sary nalaina niaraka tamin'ny Honor 6 Plus
6.1 Sary mahazatra amin'ny tontolo samihafa
6.2 Tifitra miaraka amin'ny Wide Aperture tsy misy fanovana vs Wide Aperture miaraka aorinan'ny fanodinana
7 Sary mahazatra vs maody HDR
8 Ny batterie 3.600 mAh dia mampanantena fahaleovan-tena mihoatra ny ampy
Honor 6 Plus, namboarina niaraka tamin'ny akora premium
Ny telefaona rehetra ao amin'ny elanelana Honor, marika faharoa an'ny Huawei, dia mampiasa plastika amin'ny fananganana ny vatany. Zavatra antenaina amin'ny fitaovana misy vidiny tery toy izany. Tsy izany no izy Vita ny voninahitra 6 Plus.
Ary io Honor io dia nikarakara na dia ny antsipiriany kely indrindra aza tamin'ny fanomezana ny Honor 6 Plus. Manana endrika mahaliana ve izy io? Tsia mihitsy. ny Honor 6 Plus dia manjombona raha resaka famolavolana no resahina , toy ireo mpikambana hafa ao amin'ny tandapa Honor. Raha mahita sary eo anoloana ianao dia tsy hainao ny mamantatra hoe iza ilay telefaona. Mazava ho azy, ao amin'ny faritra aoriana, efa niova ny raharaha.
Misaotra ny vita amin'ny fiberglass ny lamosina dny Honor 6 Plus. Raha ny fahitana azy dia toy ny fitaratra miady saina izay mampifangaro ny Sony Xperia Z, fa ny mikasika azy dia toa plastika tena tsara. Tena fahatsapana te hahafanta-javatra izany, fa fahatsapana tsara tokoa. Ankoatr'izay, ny lamina tafiditra ao amin'ny famaranana dia tena mahafinaritra ny maso.
Mariho fa, na dia phablet aza ary mila tanana roa hampiasana azy, mahazo aina tsara ny fihazonana, raha tsy misy izany fahatsapana izany dia ny phablets hafa no mahatonga ny fihazonana azy amin'ny tanany iray dia hianjera izy. Miaraka amin'ny refy 150,46 x 75,68 x 7,5mm ankoatry ny lanjan'ny 165 grama, mazava ny asan'ny ekipa mpamolavola Honor's manao ny 6 Plus ho fitaovana mora ampiasaina na eo aza ny refy.
Lafiny iray tena mahaliana ihany koa ny toe-javatra misy ny mpandahateny ao amin'ny Honor 6 Plus. Iray amin'ireo tena manintona ny phablet ny fahafaha-manararaotra ny habeny hankafizany ny votoatin'ny multimedia sy ny lalao video. Ilay mpandahateny, mijanona ao ambadiky ny telefaona, dia manakana antsika tsy hanarona azy tsy nahy rehefa milalao isika. Zavatra tena ankasitrahana.
Amin'ny maha-lohamilina azy amin'ny mofomamy, ny Honor 6 Plus dia manana zana vy amin'ny sisiny, afa-tsy ny ambany, izay misy ny port USB micro. Ireo vita ireo dia manome a mbola fijerena premium kokoa amin'ilay phablet aziatika vaovao aza. Ny bokotra fanaraha-maso ny haavon'ny feo sy ny herinaratra ao amin'ny terminal dia vita amin'ny aliminioma ihany koa, izay mahafinaritra ny fanohina ary manome ny fahatsapana faharetana.
Eo ambanin'ny bokotra herinaratra fotsiny no ananantsika ny slot SIM roa izay nosokafan'ny mekanika fanjaitra mahazatra. Ao amin'ny iray aminy ihany koa afaka mametraka Micro SIM na karatra micro SD isika, raha ao amin'ny efitrano hafa dia afaka mametraka karatra SIM SIM isika.
Raha fintinina, amin'ny lafiny famolavolana ny Honor 6 Plus dia manjavozavo raha hitantsika eo aloha izy, rehefa ahodinao io dia efa niova ilay zavatra. Ny famaranana dia misy kalitao manome ny finday fijery premium, zavatra izay mbola tsy hitantsika hatrizay tao anaty phablet misy vidiny tery toa izany raha jerena ny mampiavaka azy ara-teknika.
Asehoy: iray amin'ireo tanjaky ny Honor 6 Plus
Efa nolazaiko fa ny iray amin'ireo lahasa lehibe ananan'ny phablet dia ny fahafahana mankafy atiny multimedia. Ary amin'ity lafiny ity ny Honor 6 Plus dia manaiky an-tsoratra. Ny tontonana IPS 5.5-inch izay avoakan'ny Honor 6 Plus miaraka amina vahaolana 1080p dia maranitra lehibe, misaotra ny 444ppp mihoatra ny mahavariana izay mampanantena fa ny famakiana, ny fijerena horonan-tsary na ny fankafizanao ny lalao dia ho traikefa mahafa-po fotsiny.
Ny loko dia toa matanjaka be nefa voajanahary, miaraka amina zoro mifanohitra sy jery mijery mihoatra ny sahaza azy izay miasa tsara afa-tsy amin'ny tontolo iainana mirehitra. Ary, na dia amin'ny andro somary maintso aza dia afaka manohy mahita ny efijery an'ny Honor 6 Plus ianao, mihena be ny fahazavana. Adinoy ny mijery sarimihetsika eny amoron-dranomasina raha tsy hoe misy elo mandrakotra ny telefaoninao.
Ny rNy valin'ny efijery mikasika ny Honor 6 Plus dia tonga lafatra ary ny famirapiratana faran'izay kely sy kely indrindra dia mihoatra ny ampy. Tahaka ny fanao amin'ny terminal Huawei rehetra, mamela anao hametraka ny mari-pana loko amin'ny efijery Honor 6 Plus ny mpanamboatra mba ahafahanao manitsy ny loko mifanaraka amin'ny tianao.
Phablet matanjaka be matoky ny vahaolany manokana
Huawei dia miavaka amin'ny famolavolana ny mpikirakira azy manokana. Ny vahaolana HiSilicon Kirin dia safidy azo ekena ary ny Honor 6 Plus dia mampifangaro ilay tovovavy mahafatifaty ampiasain'ny mpanamboatra: mpanodina. Kirin 925, SoC matanjaka izay mampiditra ati-doha Cortex A15 efatra amin'ny 1.8 Ghz ary efatra A7 hafa amin'ny 1.3 Ghz.
Raha ampiantsika ity Mali-T62 GPU, RAM 3 GB ary tahiry anatiny 32 GB, tadidio fa afaka mivelatra amin'ny alàlan'ny slot misy ny karatra micro SD izy, avo lenta tanteraka ity.
Ok, cores marobe ary RAM mihoatra ny ampy, fa ahoana ny fomba fanaovan'ny Honor 6 Plus eo amin'ny lafiny fampisehoana? Toy ny landy. Ireo isa 42.113 6 tratry ny Honor XNUMX Plus taorian'ny nandalo fitsapana nataon'ny AnTuTu dia mampiseho ny asa tsara vitan'i Huawei miaraka amin'ny Kirin 925.
Saingy tsy tiako ny matoky ny tarehimarika sy ny angon-drakitra, ka nomeko ny tehina Honor 6 Plus hitsapana ny lalao manapotipotika indrindra eny an-tsena, hahitako ny fihetsiky ny Mali-T62 GPU tamin'io lafiny io. Averiny indray, mankasitraka loko miloko izy; na dia misy lag kely kely aza rehefa manandrana lalao toy ny Modern Combat 5.
Android 4,4 KitKat, ny Achilles ombelahin-tongotry ny Honor 6 Plus
Hatreto dia mahita phablet feno tanteraka miaraka amin'ny fampisehoana mihoatra ny ampy isika. Fa ny Honor 6 Plus dia manana tsiambaratelo maizina: ny lambany manokana. Hanombohana azy, Manomeza voninahitra amin'ny antsipiriany hitako fa mahamenatra: Ny Honor 6 Plus dia mandeha amin'ny Android 4.4 KitKat. Inona ity vazivazy ratsy ity? Tsy mahazatra ny telefaona avo lenta izay namely ny tsena tamin'ny volana Mey tamin'ity taona ity ho avy miaraka amin'ny Android 4.4. Ok, avy amin'ny Honor dia nampanantena izy ireo fa efa ho latsaka ny fanavaozana ny Honor 6 Plus mankany Android L, fa miresaka momba ny avo lenta izay tonga eo an-tsena miaraka amin'ny kinova efa ela an'ny rafitra fiasa izahay.
Mikasika ny sosona manokana, dia ambany ny Honor 6 Plus EMUI 3.0. Fifanarahana mahafinaritra izay, amin'ny tena fomban'ny iOS, mampiasa birao samihafa fa tsy amin'ny vatasarihana fampiharana. Raha vantany vao zatra izany ianao dia haingana sy mora ampiasaina izy io, ary koa afaka mamorona lahatahiry handamina tsara kokoa ireo fampiharana anao.
Na dia manolotra fahombiazana tsara indrindra aza ny sosona EMUI, tsy misy fanapahana na fijanonana, ny safidy multitasking dia manelingelina be. Miaraka amin'ny hery ananan'ny Honor 6 Plus, ny zavatra mahazatra indrindra dia ny fisokafan'ny rindranasa marobe ary araraoty ny fomba multitasking hidirana amin'izy ireo. Ny olana dia mila efa ho iray segondra vao hosokafana ary avy eo ny zava-misy mahita fampiasa efatra misokatra farafaharatsiny ary mila mamaky varavarankely samihafa hahitanao ilay rindranasa tianao hosokafana dia mety hahasosotra. Haingam-pandeha kokoa ny mandeha any amin'ny menio lehibe ary mahita ilay rindranasa tiana hampiasaina toy izay hanararaotra multitasking.
Ho setrin'izany, asongadinay ireo safidy fanamboarana marobe, ahafahantsika manamboatra masontsivana maro araka izay itiavantsika azy, afaka mamadika ny efijery amin'ny fikasihana tsotra roa, mitovy amin'ny Knock of LG, na afaka mampandeha asa sasany toy ny ny fakan-tsary amin'ny fanaovana fihetsika tsotra eo amin'ny efijery. Ny vokany dia tena manintona ary miasa haingana be. Farany misaotra ny fampidirana ny Radio FM ho fenitra, zavatra izay tsy azoko manokana fa be dia be ny mpanamboatra mandroaka an'ity singa ity.
Fakan-tsary Honor 6 Plus, zavatra manintona hafa an'ity phablet mahaliana ity
Ny iray amin'ireo tanjaky ny Honor 6 Plus dia ny fakantsary lehibe an-tsary, misy roatra 8-megapixel Sony. Ahoana? Lente roa? Eny, ary ny valiny dia tena mahaliana. Hanombohana dia handinika ny hafa isika fanamafisana natolotry ny fakantsary Honor 6 Plus.
beauty: Rehefa mampihetsika io safidy io isika dia hanao fisamborana mahazatra, fa ny rafitra kosa dia hikarakara ny fanadiovana ireo kilema ireo amin'ny hoditra, tena hitako fa tsy dia ilaina loatra izany, fa farafaharatsiny ny fanadiovana dia tsy dia mazava loatra toy ny amin'ny terminal hafa.
Super Night: Ity fomba mahaliana ity dia ahafahanao mahazo sary mamiratra kokoa amin'ny alàlan'ny fitifirana tifitra maro izay manova ny fahatsapana ny fakan-tsary mandritra ny 20 segondra.
Amin'ireto fizarana rehetra ireto dia ny iray ihany no tena miavaka Mode HDR sy ny maody Supernight. Raha ny maody HDR, amin'ny Honor 6 Plus dia miasa toy ny landy izy io. Amin'ny tontolo misy fahasamihafana miloko avo sy hazavana ambany, ny fomba HDR dia miasa fahagagana.
Ho an'ny Maody supernight, hitako fa safidy mahaliana nefa tsy manampy. Hanombohana dia mila mitazona ny telefaona milamina mandritra ny 20 segondra ianao raha tsy tianao ho manjavozavo ilay sary. Ary efa nolazaiko taminao fa, taorian'ny fiezahana mafy dia tsy afaka nanao fakana sary amin'ny tanana mihazona ny telefaona.
Ny vahaolana? Tripod, izay no tolo-kevitry ny telefaona. Raisina an-tsaina izany Ny maody Super Night dia mamela anao hanitsy ny ora ISO sy ny fotoana ialana mazava fa mikendry mombamomba matihanina kokoa izy io. Satria tsy matetika no mitondra tripod miaraka amiko, dia esoriko mahasoa ity safidy ity afa-tsy amin'ny toe-javatra tena vitsy izay ahafahantsika manohana ny telefaona amin'ny faritra sasany na te-hanao ny matihanina indrindra amin'ny mety ho fakan-tsary ianao.
Anisan'ireo toe-javatra asongadinay ny fisian'ny fanapahan-kevitra momba ny sary isan-karazany, ny fahafaha-mampihetsika ny famantaranandro 2,5 na 10 segondra, safidy ho an'ny ovay ny fandanjana ISO sy fotsy na ny fanitsiana ny mahavoky, ny fifanoherana ary ny famirapiratana.
Ankehitriny efa hitanao ny mampiavaka ny fakantsary Honor 6 Plus, andao hiroso amin'ny hetsika isika. Ary io no nahagaga ahy ny fakan-tsarin'ny Honor 6 Plus. Ho fanombohana Azontsika atao ny manamboatra tsara ny fifantohana ary manitsy ny haavon'ny fihanaky amin'ny alàlan'ny fikasihana ilay efijery: misy Masoandro mipoitra eo akaikin'ny boribory ifantohana izay ahafahantsika manova ny fisehoan'ny sary amin'ny fotoana tena izy. Mba hanaovana izany dia mila atsofoka fotsiny ny rantsan-tànanao ambonin'ny faribolana. Ny valiny dia, amin'ny sary amin'ny alina na amin'ny hazavana be loatra, afaka maka sary misy kalitao avo kokoa isika.
Ary ankehitriny isika dia tsy maintsy miresaka momba ny safidy mahaliana indrindra amin'ny fakantsary mahery an'ny Honor 6 Plus: Fomba fisamborana aperture midadasika. Amin'ny alàlan'ity maody ity no ahafahantsika miova ny vavahady manomboka amin'ny F / 0.95 ka hatramin'ny F / 16. Mba hanararaotana an'io fampiasa io dia mila maka sary ianao amin'ny latsaky ny roa metatra, fa ny valiny dia mahatalanjona fotsiny.
Su Rindrambaiko aorian'ny fikirakirana sary mahery vaika dia ahafahantsika manitsy ny fakana raha vao vita hanitsy ny vavahady ary hampanjavozavo ny ampahany mahaliana antsika, ankoatry ny fametrahana andiana sivana mahaliana. Na dia marina aza fa tsy hanararaotra an'io fampandehanana io ny olona sasany, ny olon-tiana amin'ny tambajotra sosialy dia hahita an'io safidy io manaitaitra sary mampiavaka azy io.
Mampitaha ireo sary nalaina tamin'ny fakantsary Honor 6 Plus sy amin'ny terminal avo lenta toy ny Galaxy S6, mazava ho azy fa taraiky ao aoriany ilay solomaso Honor 6 Plus. Fa raha mahita azy ireo eo amin'ny efijery informatika isika. Rehefa heverina fa amin'ny telefaona na takelaka dia tsy azo atao ambanin-javatra ny fihasamihafana dia mazava fa nanao asa tsara tokoa i Honor amin'io lafiny io, manome ny Honor 6 Plus fakan-tsary hafa, matanjaka ary ambonin'izany rehetra izany miaraka amina karazana fahafaha-manao izay hahafaly ireo tia sary.
Ohatra amin'ny sary nalaina niaraka tamin'ny Honor 6 Plus
Sary mahazatra amin'ny tontolo samihafa
Tifitra miaraka amin'ny Wide Aperture tsy misy fanovana vs Wide Aperture miaraka aorinan'ny fanodinana
Namboarina tamin'ny safidin'ny modely Wide Aperture
Sary mahazatra vs maody HDR
Ny batterie 3.600 mAh dia mampanantena fahaleovan-tena mihoatra ny ampy
Ny fizarana farany tiako horesahina amin'ity famakafakana ny Honor 6 Plus ity dia ny fizakantenan'ny terminal. ny Honor 6 Plus dia manana bateria 3.600 mAh namboarina. Mampanantena fahaleovan-tena mandritra ny roa andro izy ireo amin'ny taratasy. Maharitra maharitra toy izany ve ny bateria Honor 6 Plus?
Rehefa nandinika ireo fantsona hafa ao amin'ny tandindona Honor an'ny mpanamboatra Aziatika aho dia nanasongadina hatrany ny ain'ny bateria. Ary ny 3.600 mAh ao amin'ny Honor 6 Plus dia mandeha tsara tokoa. Amin'ny fampiasana mahazatra (fitetezana Internet, fampiasana serivisy fandefasana hafatra eo noho eo, hafatra ary mailaka ankoatry ny adiny 3 isan'andro ao amin'ny Spotify) aryl Honor 6 Plus dia naharitra 2 andro tontolo andro tamiko. Na dia marina aza fa mampihetsika ny maody Airplane aho amin'ny alina, dia tsy maintsy miaiky aho fa ny fampisehoana dia mihoatra ny mahatalanjona.
Raha manampy an'ity izaho ity naharitra 6 ora mahery niaraka tamin'ny efijery tamin'ny fihazakazahana ny lalao Modern Combat 5, Mazava fa ny batterin'ny Honor 6 Plus dia manana tadiny mihoatra ny ampy hanohanana ireo fitaovana matanjaka ao amin'ity fitaovana ity mandritra ny roa andro na iray andro raha te hankafy lalao na atiny multimedia ianao nefa tsy manahy ny amin'ny famenoana telefaona.
Raha raisina ny kaonty izay ampidiriny, ny fakantsary matanjaka izay manolotra fahafaha-manao betsaka sy ny fizakantena natolotry ny Honor 6 Plus, cvoafonja izay ho an'ny 399 euro dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra raha mitady a phablet miaraka amin'ny famaranana kalitao ary mahazaka ny jogging isan'andro tsy misy olana.
Mampalahelo fa miasa miaraka amin'i KitKat izy io na dia Honoré 6 Plus aza dia antenaina hanavao ny tsimbadika farany an'ny rafitra fiasan'i Google tsy ho ela. Ahoana ny hevitrao momba ny fanadihadianay? Hividy ny Honor 6 Plus ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Honor 6 Plus, phablet avo lenta tsy latsaky ny 400 euro
HTC One M9 sy One M8 dia havaozina amin'ny Android 5.1.1 Lollipop